Ihe omuma nke uba - ihe omuma di iche iche na ihe nnochi nke na eweta nma
Ihe nnọchianya nke ọdịda - otu esi ahọrọ onye dị ike?
Ịchọrọ inwe ezigbo onye nyocha nke nwere ike imegharị ndụ, wee jiri akara nke ọdịda. Enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọnụ ọgụgụ na eserese nke nwere ike, nke a ga-eduzi na egwu ahụ. Ịkwesịrị ịhọrọ dabere na mmetụta nke aka gị.
Ihe atụ ndị na-eweta ihu ọma
Ndị mmadụ ejiriwo oge dị iche iche chebe onwe ha pụọ ​​na ndị na-adịghị mma, iji nwekwuo obi ụtọ ma nwee mmeri . Ihe nnọchianya ndị kachasị ewu ewu na-eweta ọchịchị na akụ na ụba:
Ịkwa - na-emeri ihe ịga nke ọma, na-enye ume ma na-emezu ọchịchọ.
Bee - eme ka akụ na ụba baa ọgaranya n'ihe niile.
Nkwuba - na-adọta ọdịmma ma na-enyere aka iji nweta ihe mgbaru ọsọ.
A na -ewere cat dị ka ihe nnọchianya nke chioma.
Ladybug - na - egosi ọdịda, ọdịmma na ngọzi nke ndị ka elu.
Ihe ngosi nke uba - klova
Ọtụtụ osisi nwere ume nke nwere ike imetụta mmadụ. Onye na-acha akwụkwọ oyiri nke anọ bụ ihe nnọchianya nke chioma, nke bụ mba maka Irish. Ndị mmadụ kwenyere na ọ bụrụ na ịchọta osisi dị otú a, ịnwere ike ịtụ anya mgbanwe dị n'ihu. Iji gbanwee akwukwo nke clover n'ime azu, ọ ghaghị ịmịchaa na mgbe niile. A na-eji ọlaedo ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ eme ihe ịrịba ama na akara ndị na-eweta ọdịmma. E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga - esi eji clover:
Tinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ n'okpuru akpụkpọ ụkwụ tupu ị apụ n'ụlọ, mgbe ahụ i nwere ike ịchọta onwe gị ezi ịhụnanya .
Iji nweta ọganihu na ego, ọ dị gị mkpa iburu clover n'ime obere akpa gị.
Iji chebe ụlọ ma na-adọta obi ụtọ, ọ dị gị mkpa itinye clover n'okpuru iko ma kpọgidere ya n'ihu ụlọ ụzọ.
Akara nke uba - kpakpando
Iji gbanwee ndụ gị maka ka mma, ịnwere ike iji kpakpando nke Erzgama dị ka ọkaibe. Ọ na-enwe ike ịchọta ọṅụ, nwee ihe ịga nke ọma ma chebe onwe ya pụọ ​​na nsogbu. Ha na-ele ihe atụ a anya dị ka kpakpando na-eduzi nke amaghị ihe, nke ga-enyere gị aka ịhapụ ụzọ ziri ezi. A na-akwado kpakpando nke Erzgamma n'olu, nke mere na amulet dị nso n'obi. Ị gaghị enwe ike ịnọnyere gị ruo ogologo oge na ọ kachasị mma iji yie ya ụbọchị ole na ole tupu ihe omume ahụ ma gbaa mgbe obere oge gasịrị.
Ọ bụrụ na ihe nnọchianya nke ọdịda na ọṅụ mgbe ị na-eyi na-akpata mmetụta ndị na-adịghị mma, mgbe ahụ, nke a na-egosi na ụdị talisman dị mma ka ọ ghara iji. E nwere echiche dị iche iche nwere ike igosi akara akaebe:
Ndị na-agụ kpakpando kweere na ụzarị 12 nke kpakpando na-anọchite anya ihe ịrịba ama nke zodiac. Ihe nnọchianya ahụ na-egosi ịdị n'otu nke kpakpando na mbara igwe na njedebe.
Ndị ọkà mmụta sayensị kweere na ọ bụ Ọnwa na Sun pụtara. Igwe uzo na-adọta obi uto n'ihi mmetuta nke ihe di ike nke elu igwe.
Ndị ọkachamara na-ele ihe anya dị ka etiti eluigwe na ala ma ọ bụ chakra dị ike nke na-ahụ maka ndụ.
Ihe n 'uche - igodo
Onye dị ike nke oge ochie bụ isi, nke na-adọta ọdịmma ma na-echebe site na nkwụsị. Na mmekorita nke oge a, a na-eji amulet nweta amamihe na cognition nke ịbụ. E nwere ọtụtụ ụzọ esi eji akara nke ọdịda na akụ na ụba:
Dị ka onye na-ahụ maka onwe ya, a na-atụ aro ka ị buru otu igodo na agbụ n'olu. Ọ bụrụ na ọ bụ ọla edo, ọ nwere ike ichebe ndị mmadụ pụọ na nhụghasị, ọ ga-adọta ọganihu.
Ihe a na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ ya na nkwekọrịta ọla edo atọ bụ akara nke ahụ ike, akụ na ụba na ịchọta ịhụnanya.
N'ịkọwa ihe nnọchianya nke ọdịda, ọ dị mma ịkọpụta nnukwu igodo nke Solomọn, nke a na-eji mee ihe na Kabbalah. Ụdị ahịa a adịghị adabara ndị nkịtị, ọ na-atụ aro ka ọ bụrụ naanị na ọ bụ onyinye anwansi.
Isi ihe, nke ọlaọcha, dị mma maka ụmụ akwụkwọ, na-amalite ndị ọchụnta ego na ndị chọrọ ịkwalite ọrụ ha.
Ị nwere ike kpọgidere ụyọkọ mkpịsị ugodi na ebe a na-ahụ anya na ụlọ dị ka onye na-azụ ahịa, nke ga-adọta ezigbo ọdịmma, ma chebe gị pụọ na nkwụsị.
Ihe nnọchianya nke chioma bụ ịnyịnya
A na-eji anụmanụ dị mma dị ka talisman na feng shui, nke ga-adọta ọganihu na ọrụ na azụmahịa. E nwere ọtụtụ ịnyịnya na ihe ha pụtara:
Anumanu, na-eguzo n'azụ ụkwụ ya, ka e mere iji mee ka mmadụ mara mmeri na mmeri.
Anumanu a na-agbaghi ​​agba na nke na-agba ọsọ bụ ihe nnọchianya nke chioma, nke na-egosipụta mmeri n'elu ndị iro ahụ. A na-atụ aro ka ị jiri ihe oyiyi ma ọ bụ ihe osise nke ịnyịnya dị otú ahụ iji nwee ọganihu n'ọrụ, azụmahịa na asọmpi.
A na-eji ịnyịnya, ndị gbara ya gburugburu, na-adọrọ mmasị, meziwanye ọnọdụ ego ma mee ka ọha mmadụ dịkwuo mkpa.
Maka akara uju iji nye nsonaazụ, ọ dị mkpa ịhazi ndetu ma ọ bụ ihe osise na ụlọ. Tinye ịnyịnya na ndịda-n'ebe ọdịda anyanwụ na n'ebe ndịda. O di nkpa ka ekwenyeghi na onu ogugu ma obu onu. Ndị ọkachamara nke feng shui anaghị akwado ịtụkwasị ihe oyiyi nke ịnyịnya n'ime ime ụlọ. Iji nweta ihe ịga nke ọma na-arụ ọrụ, dobe ọnụ ọgụgụ nke ịnyịnya na desktọọpụ.
Akara nke chioma - onyinya inyinya
Otu n'ime akara ndị kachasị ewu ewu maka ịchọta chioma bụ horseshoe. Na oge ochie, ekwenyere na ọ bụrụ na mmadụ ahụ n'okporo ámá dị otú ahụ, n'ihu ya bụ ihe ịga nke ọma na obi ụtọ. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-ele ịnyịnya ahụ n'oge ahụ anya dị ka akụnụba, ebe ọ bụ na ọ bụghị mmadụ nile nwere ike imeli ya. A ga-eji ígwè mee ihe nnọchianya nke obi ụtọ na ọṅụ. Dị ka ọdịnala si kwuo, a ghaghị ịtụkwasị onyinya n'elu ọnụ ụzọ.
Banyere otu esi eme ka a kwadoro onye ọ bụla, mgbe ahụ na mba dị iche iche, e nwere echiche dịgasị iche iche:
N'ebe Ọwụwa Anyanwụ, Latin America na ọtụtụ mba dị na Europe, ọ bụ omenala itinye ụzụ ịnyịnya na mpi ala, nke mere na site n'udo, obi ụtọ ga-abanye n'ime ụlọ ahụ.
Echiche ndị na-ezighị ezi n'etiti ndị bi na England na Ireland, ndị kweere na a ga-eburu mpi ahụ elu, ebe nke a ga-anọchite anya iko zuru ezu.
A na-agbanye akara nke ọkpụkpụ ịnyịnya ibu n'Ịtali ka onye ọbụla bata n'ụlọ ahụ, na-azụ ya. Na Mexico, kama nke ahụ, ọ dịghị onye nwere ike imetụ ya aka, ka ọ ghara ịzụta obi ụtọ, ya mere ka ọ dị elu, na-eji akwa na mkpụrụ ego chọọ ya mma.
Ihe atụ nke ọdịmma nke ndị dị iche iche
Ọtụtụ ndị mmadụ, mkpakọrịta na omenala nwere ihe ndị ha pụrụ iche, nke nwere ike dị ike nke nwere ike ịme ihe ịga nke ọma ma gbanwee ụwa ka mma. Ụdị ihe atụ, na-adọta ego na ọdịda:
na Africa - ezé nke crocodile;
na Asia - achara na cricket;
n'etiti ndị India, Kachina (obere bebi);
ke Egypt - a scarab.
Slavic akara nke chioma
Ndị Slav oge ochie ji aka ha mee ihe dị iche iche, bụ nke na-eme ka ha ghara inwe mmasị ogologo oge. A na-etinye akara akara ike na belt, ọla aka, belt, ma meekwa pendants. Akara Slavic maka ọdịda na akụ na ụba sitere na akwa, na-eyi uwe na-ese na efere ma ọ bụ mgbidi. N'etiti ndị kasị ewu ewu bụ ihe nnọchianya na-esonụ nke ọdịmma na akụ na ụba n'etiti ndị Slav:
Kolyada . Jiri akara a na-adọta mgbanwe n'ime ndụ gị ka mma.
Agbamakwụkwọ . A na-eji ihe ịrịba ama a eme ka ị nweta ọdịmma gị. Ndị na-eto eto na-eji ya iji chọta onye ọlụlụ. Maka ndị mmadụ, akara ahụ ga-eme ka mmekọrịta ahụ sikwuo ike, meekwa ka mmetụta ahụ dịkwuo ike.
Alatyr . Ihe ngosi a na-anọchite anya na-eme ka akụ na akụ na ụba baa ọgaranya.
Ihe nnọchianya nke Japan
Iji nweta ihe ịga nke ọma ná ndụ ha, ndị bi na Japan na-eji onyinyo chi asaa nke Buddhist syncretism. Onye ọ bụla n'ime ha bụ maka ọrụ ha, ndị kachasị ewu ewu bụ ndị na-esonụ:
Daikokuten . Chi a bụ onye na-akwado akụnụba na ọganihu. Ọ na-akwado ndị na-arụ ọrụ ugbo. Chi a nwere n'azụ ya a knapsack nke nwere ndidi, amamihe na osikapa (akụ na ụba). N'aka aka nri ya, ọ nwere onye na-eme anwansi - ihe nnọchianya nke ọdịmma na ihe ịga nke ọma, nke a pụrụ iji mee ihe iche iche.
Fukurokuju . Nke a bụ Chinese hermit nke nwere ike ịrụ ọrụ ebube. Ọ na-ejide akwụkwọ mpịakọta na amamihe ederede nke ụwa dum n'aka ya. Ọ na-adọrọ mmasị, ma na-enye obi ụtọ n'ezinụlọ.
Ngosipụta Chinese nke ọdịda
Ọtụtụ ndị agbụrụ, ndị a ma ama na China, maara anyị n'ihi ozizi ndị a ma ama nke feng shui.
Dragọn . Otu n'ime ihe nnọchianya mba ndị na-adọta ọdịda ma na-enye obi ụtọ. A na-atụ aro ka ị debe ya n'ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka dragọn ahụ mezuo ọchịchọ ahụ, họrọ ihe oyiyi nke dragọn ahụ, onye ọnụ ya bụ pearl ahụ.
Ejiri ụkwụ atọ . Akara Chinese a maara nke ọma na ihe ịga nke ọma, nke a na-ewu ewu n'ụwa nile. Ihe oyiyi nke ejiji ọlaedo nwere mkpụrụ ego n'ime ọnụ gị ga-adọta obi ụtọ na akụnụba. Mee ka ọ dị mma n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'akụkụ ọnụ ụzọ.
Azụ azu . Ị nwere ike iji ọ bụghị naanị ihe atụ, kama na-adị ndụ azụ na akwarium, nke ga-adọta ọ bụghị nanị na ihe ọma, kamakwa ọdịmma ezinụlọ. Ọ ka mma ma ọ bụrụ na ịzụta azụ itoolu n'otu oge: uhie asatọ ma ọ bụ ọlaedo na otu oji.
Ihe nrite nke India
Ọtụtụ ga-eju anya, mana otu n'ime ihe nnọchianya nke ọdịmma nke ndị India bụ swastika, nke bụ obe na njedebe na njedebe. A na-ahụ ihe ịrịba ama anyanwụ dị ka ụdị ndụ, ụba na ìhè. Ihe oyiyi, nke na-eweta ọchịchị, ka a pịrị apị na mgbidi nke ọtụtụ ụlọ nsọ, nkume na ihe ncheta, gbasaa na India.
Unicorn na akụkọ ọdịnala - enwere ọhụụ n'oge anyị?
Achilles ikiri ụkwụ - akụkọ Gris oge ochie nke Achilles
Ihe nnọchianya ahụ bụ akara nke njedebe
Igwe ọkụ abụọ
Ikpe ikpe ikpe - gịnị ga-eme ndị mmehie mgbe ikpe ikpe ikpeazụ gasịrị?
Chernobog - onye ọchịchị Slavic nke ọchịchịrị
Chineke nke ọnwụ
Chi nke Olympus
Kedu ka esi akpọ Setan?
Enwere Hel na Eluigwe?
Ihe ịrịba ama nke onye amoosu
Kedu ka esi akpọ Queen of Spades n'ehihie?
Mistletoe ọbọ maka ọnwụ
Azụ mmiri ozuzo
Kedu ka esi lekọta ụmụ Benjamin?
Buru kabeeji - ọdịnaya calorie
Sean Ashmore ghọrọ nna
Blanks site na uzo maka oyi - Ezi ntụziaka
Taylor Lautner nwetara abụba!
Ụdị ọhụụ dị ukwuu Tess Holliday na-echere nwatakịrị
Ufuru DKNY "Green Apple"
Ememme ezumike - ebee ga-eso nwa ahụ gaa?
Beyonce na Jay Z na nwa ya nwanyị nwere obi ụtọ na agbamakwụkwọ nke ndị enyi ha
Ariana Grande dịka nwatakịrị
Nri ero a ọ bara uru?
Kate Winslet na Idris Elba ga-agba agba na mmegharị ihe nkiri nke ụwa kacha mma ere ahịa
Ogbugbu ebighi ebi
Nri maka ihe kacha mkpa
Champagne si na osisi vaịn n'ụlọ
Ịgba Tantum Verde